Dingidira Rezvemitambo ReHIFA Rotanga MuHarare
Chivabvu 01, 2012
Chirongwa cheHarare International Festival Of The Arts (HIFA) chegore rino chatanga nemutsindo muHarare gardens nhasi apo nyanzvi dzekuimba nemitambo dzinobva pasi rose dzichange dzichiratidza hunyanzvi hadzo kwemazuva matanhatu anotevera.
Nyanzvi dzemunyika dzinosvika chiuru dzichange dziri pamitambo iyi. Mitambo iyi iri pasi pedingindira rinonzi, “A show of spirit” iri kutarisirwa kunakidza veruzhinji avo vachawana mukana wekupembere ra bhavhadheyi remuimbi ane mukurumbira, oliver mtukudzi, uyo achange achisvitsa makore makumi matanhatu muna gunyana gore rino.
Mtukudzi achaimba nemumwe muimbi wekusenegal ane mukurumbira, Ismael Lo kuTelecel main stage muHarare gardens neSvondo.
Mutambo weHIFA wave nemakore gumi nematu ichiitwa muHarare. Vanowona nezvekufambiswa kwemashoko mu HIFA, vaTafadzwa Simba, vaudza Marvellous Mhlanga Nyahuye weStudio7 kuti vari kufanzwa nemafambiro ari hurongwa hwavo.
Hurukuro Nava Tafadzwa Simba